Umbono omangalisayo kwintlambo ye-ourika
Igumbi elise- indawo yokuhlala nenesidlo sakusasa sinombuki zindwendwe onguRiad
URiad unezimvo eziyi-213 zezinye iindawo.
I-Dar Ikalimo Ourika yiNdawo yabahambi ebekwe kwindawo entle enemisebenzi emininzi yolonwabo lwabantu abadala kunye nabantwana ngokufanayo. Ihostele inamagumbi ali-10. Amagumbi akhululekile kakhulu, iindawo zokulala ezisemgangathweni ophezulu kakhulu. Ihostele inendawo engqongileyo entle eneendawo ezinkulu zemidlalo kunye nokuphumla emthunzini wemithi nakwindawo eluhlaza. Ukutya kwethu kwengingqi, ukukhanya, okunencasa kunye nokwenyani akusayi kusilela kukuyolisa
I-Dar Ikalimo Ourika yiNdawo yabahambi ebekwe kwindawo entle enemisebenzi emininzi yolonwabo lwabantu abadala kunye nabantwana ngokufanayo. Ihostele inamagumbi ali-10. Amagumbi akhululekile kakhulu, iindawo zokulala ezisemgangathweni ophezulu kakhulu. Ihostele inendawo engqongileyo entle eneendawo ezinkulu zemidlalo kunye nokuphumla emthunzini wemithi nakwindawo eluhlaza. Ukutya kwethu kwengingqi, ukukhanya, okunenca…
Intlambo ye-Ourika inika iindwendwe zayo iindawo ezininzi ezintle: iilali ezincinci ezintle, iingxangxasi ezimangalisayo zeSetti Fatma, iindawo zakudala kunye nomhlaba apho amawa, amathafa amakhulu kunye nemilambo.
Yindawo edume kakhulu kubathandi bendalo kunye nabathanda ukuhamba intaba.
Umbuki zindwendwe ngu- Riad
abasebenzi bayafumaneka iiyure ezingama-24 ngosuku ukuququzelela ukuhlala kweendwendwe kunye nokwenza kube mnandi kangangoko kunokwenzeka
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Ourika